Adeegyada dijitaalka ah iyo telefoonka | Swedbank
Bangiga qaybta shirkadaha
Kaararka iyo qarash bixinta
Adeegyada dijitaalka ah iyo telefoonka
Korona fayrus (COVID-19)
Adeegeena digitaalka ah waa ay kuu fududanaysa in aad fiirisid xisabadkaada, aad lacag dirtid, aad bixisid qarashaadka oo aadna kor ka fiirisid kaydkaaga. Fadlan booqo faraca xafiiskeena si lagaaga caawiyo furitaanka adeegyada bangiga oo aad u baahantahay.
U wac bangiga -macamiisha
Waxaad ka xulan kartaa inta u dhaxeysa isku-adeegga ama adeega gaar ah halka aad la hadli kartid la taliye-waa ay furantahay 24 saac maalinti. Wac 0771-22 11 22 Sweden gudaheeda ama+46 (0)771-22 11 22dibadda wadanka.
Si aad telefoon ugu adeegatid bangiga waxaa lagaa rabaa in laguugu aqoonsada adiga oo adeegsanaayo lambarkaaga gaarka ah. Waxaad ka heleysaa lambarkaaga sirta ah marki aad booqatid faraca xafiskeena adiga oo adeegsanaaya barta intarneetka qaybta Telefonbanken. Waxaad sidoo kale aqoonsi kuu noqon kara BankID.
Adeega dijitaalka-ee macamiisha
Adeegaayaga dhijitalku mar kasta waa kuu diyaar.
Waa kan qaabka uu ushaqeeya Swish-ka
Swish-ka waa adeeg lagu diro ama lagu hello lacagaha adiga oo telefoonka gacanta adeegsanaayo. Swish wuxuu ku shaqeeya Androoydh, IOS, telefoonada Windoowis 8ka ah iyo waliba tableetyada kuwaas oo tageera bankID-ga telefoonka. waxaa lagaa rabaa in aad lahaatid Mobile BankID si aad lacag ugu dirtid ama aad uga heshid Swish. Kani waa ID elektaroonig-ah oo looga taragalay telefoonadda qatarta ah iyo tableetyada.
Si aad u heshid Swish
1. Dalbo Bangiga Internetka Swish ama barnaamijka.
2. Ku soo dejiso Bixinta Kharashka Swish iyo Barnaamijka Amaanka ah BankID ee mobilkaaga ama tabletkaaga.